Tag: Ọchụchọ obodo | Martech Zone
Kpido: nchọpụta obodo
Akwụkwọ ndekọ aha mpaghara nwere ike ịbụ ngọzi na ọbụbụ ọnụ nye azụmaahịa. Enwere isi ihe atọ kpatara ị paya ntị na akwụkwọ ndekọ aha obodo: SERP Map Visibility - ụlọ ọrụ anaghị achọpụta mgbe niile na inwe azụmaahịa na weebụsaịtị anaghị eme ka ị hụ gị na peeji nke nsonaazụ ọchụchọ. Azụmaahịa gị ga-edepụtara na azụmaahịa Google iji nweta visibiliti na ngalaba maapụ peeji nchọta nsonaazụ ọchụchọ (SERP). Ọnọdụ Organic - ọtụtụ akwụkwọ ndekọ aha
Anyị na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ n'ụlọ na-ekpori ndụ ebe a na Indianapolis ma na-arụ ọrụ na mbọ inbound ahịa ha. Imirikiti ahụmịhe anyị nwere ugbu a na-arụ ọrụ na ndị ahịa ụlọ ọrụ ndị na-atụkwa anya ịkwado mpaghara anyị wepụrụ ụfọdụ atụmatụ dị ukwuu maka ha. Ndị ahịa a kapịrị ọnụ anọghị n'obodo ọ bụla, agbanyeghị, ma nwee asọmpi ebe a. Anyị debere saịtị dị ịtụnanya, wuo nnukwu ọbá akwụkwọ ọdịnaya, mepụta
Google Azụmaahịa m maka Nchọta Mpaghara
Ikpeazụ April, M mere a post banyere Google My Business. Izu ụka a, achọrọ m nwa m nwanyị n 'ntutu ntutu ya. Salonlọ Mmanya ahụ mara mma ma ndị na-arụ ọrụ ebe ahụ dị egwu. Onye nwe ụlọ ahụ jụrụ m ihe m mere maka ndụ ma gwa ya na m nyeere ụlọ ọrụ aka n'ịzụ ahịa n'ịntanetị. Anyị na-eguzo na kọmputa ma ọ kọọrọ m na isi okwu ya nke ndị na-ere ahịa mekwara weebụsaịtị ya. M